Faah faahin:- Qaraxa ka dhacay Muqdisho - Awdinle Online
Faah faahin:- Qaraxa ka dhacay Muqdisho
Qaraxa oo nuuciisa lagu sheegay in uu ahaa Miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Isgoyska Sayidka iyo Hotelka Dayax gaar ahaan Afaafka hore ee Daacad Car Care , waxaana qaraxa ka dhashay khasaaro kala duwan.
Warar kala duwan ayaa qaraxaasi kasoo baxaya, waxaana Wararka la helay ay sheegayaan in qaraxa Miino lala eegtay Gaari nooca aan xabada karin oo uu leeyahay Senator Dr Cusmaan Maxamuud Dufle katirsanAqalkaSare, balse uu ka badbaaday.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen laba kamid ah ilaalada Xildhibaanka, kuwaas oo dhaawacooda loo qaaday mid kamid ah Isbitaalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya oo ku sugnaa meel u dhow halka uu qaraxa ka dhacay ayaa goobta xiray walow markii dambe ay dib u fureen, iyada oo laamaha Amniga Soomaaliya weli wax faah faahin ah ka bixin qaraxa.
Previous articleJoe Biden oo loo doortay Madaxweynaha dalka Mareykanka
Next articleMadasha Xisbiyada oo walaac ka muujiyay Guddiyada doorashada & xalinta khilaafaadka